नेपालको बिकास गर्नको लागी साना तथा मझौला उद्योग. – Sabaikoaawaj.com
नेपालको बिकास गर्नको लागी साना तथा मझौला उद्योग.
मङ्लबार, चैत्र ८, २०७३ 9:09:02 PM	मा प्रकाशित
सुरेशराज अधिकारी , पोखरा ८ चैत्र / जापानका पुर्व प्रधानमन्त्रीे डाक्टर यूकिओ हातोयामाले नेपालको बिकासकालागि साना तथा मझौला उद्योगलाई प्रेत्साहान गनुपर्न बताएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघ कास्की शाखाले मंगलबार पोखरामा आयोजना पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले साना तथा मझौला उद्योगको संचालले नै नेपाल जस्ता देशले छिटो बिकास गर्न सक्ने बताए ।
दोस्रो विश्वयुद्ध पछी जानपान सरकारले साना तथा मझौला उद्योगमा लगानी गरेर छिटो बिकास गरेको स्मरण गदै सरकार र निजी क्षेत्रको समन्यबाट संचालन हुने साना तथा मझौला उद्योगले नेपालको बिकास सम्भव भएको बताए । हातोयामाले जापान र नेपाली बिच दोहोरो कर तिर्न पर्दा नेपालमा जापानीस लगानी बढ्न नसकेको बताएका छन् ।
उनले नेपाल जानपान मैत्री उद्योग संचालनको लागि जापानले दोहोरो कर तिर्नपर्ने भएकाले नेपालमा जापानी लगानी थेरै भएको बताए । हातोयामाले दोहोरो करको व्यवस्था हटाएमा नेपालमा जापनी लगानी बढ्ने जानकारी दिएका छन् । निजी भ्रमणको लागि नेपालमा आएका हातोयामाले नेपालमा जलबिधुतको सम्भावना रहेको बताउदै आफुपनि जलबिधुतमा लगानी गर्न तयार रहेको बताए । केही बर्षे अगाडी नेपालमा सम्म नेपालमा जापानी पर्यटक धेरै हुन्थे तर भुकम्प पछी नेपालमा जापनी पर्यटकोे संख्या घटेर छ । हातोयामाले जापान र नेपालको सिधै उडान भएमा जापानी पर्यटकको संख्या बढने सम्भावना रहेको बताएका छन् ।
दोस्रो पटक पोखरा आउका माउन्टफुजि भन्दा पनि राम्रो रहेको प्रतिक्रिया दिदै हातोयामाले जिवनमा एक पटक पोखराको भ्रमण गर्ने पर्ने बताए । म जापानमा गएर अरुहरुलाई पनि पोखरा भ्रमण गर्न अनुरोध गर्छु उनले भने । पोखरामा फोहर बढदै गएको धारण राख्दै सरसफई गर्न अनुरोध गरेका छन् । हातोयामाले पोखरा भगवान बस्ने शहर रहेको धारणा समेत राखेका छन् । सरकारी र निजी क्षेत्र मिलेर पोखरा सरसफई गर्न अनुरोध गरेका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीका अध्यक्ष दिपेन्द्र श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सञ्चालन सचिब राम प्रसाद तिमिल्सिनाले गरेका थिए ।
प्रकाशित मितिः मङ्लबार, चैत्र ८, २०७३ 9:09:02 PM